Wakanzi hauna kukodzera basa rako here? Iwe haugone kuita chero chiitiko pabasa rako here? Kugona kwako kushanda kwakaderedzwa? Dzidza kusiyanisa kusakwanisa, kusagona uye kusashanda kuti uzive kodzero dzako nezvakanakira.
Chii chinonzi kusakwanisa, kusagona uye kusashanda?
kusakwanisa inoziviswa kana pasina gadziriso kana kugadziridzwa kweyako ikozvino worktation inogoneka. Muchiitiko ichi, mushandirwi anomanikidzwa kukupa iwe reclassification kune imwe nzvimbo mukati mekambani. Kana iyo reclassification isingagoneki kana iwe ukairamba, anogona kutanga nzira yekudzinga nekuda kwekusakwanisa. Kusakwanisa kunoonekwa nachiremba webasa chete.
kusakwanisa zvinoreva kusakwanisa kushanda kana kuita mamwe mabasa ebasa rako uye zvinotevera tsaona pabasa kana chirwere chebasa. Inotarwa nachiremba uye yakasimbiswa nemupi wezano weinishuwarenzi yehutano. Kune marudzi akawanda ehurema:
Kusakwanisa kwenguva pfupi kana usingakwanise, kwenguva, hauchashandi kana kuita mabasa ako. Inogona kuve yenguva pfupi (ITP) kana yakazara yenguva (ITT). Kusakwanisa zvachose kana usingakwanise, pakupedzisira, hauchashandi kana kuita mabasa ako. Inogona kuva chikamu chechigarire (IPP) kana zvachose zvachose
Kusagona, kusakwanisa, kusashanda: ndeipi misiyano? Kubvumbi 17th, 2022Tranquillus
VERENGA MOOC Nyuchi uye nharaunda
pashureNdanga ndiine chiziviso chekusakwanisa: ndezvipi mhedzisiro?
zvinoteveraChii chinangwa chekuongorora hunyanzvi mumamiriro ekuchengetedza basa?
Crypto: kutanga paBinance
Kutengesa - 7 Inobatsira Investment